Iindaba -Ibango leenxalenye zokulinganisa ubushushu liyaqhubeka nokukhula
Ibango leenxalenye zokulinganisa ubushushu liyaqhubeka nokukhula
Okwangoku, imeko yobhubhane wasekhaya ihlala izinzile, kodwa imeko yobhubhane phesheya iya isanda, enefuthe kuthungelwano lwehlabathi lwamashishini, uluhlu lwexabiso kunye nonikezelo lwentengiso. Ngokusasazeka kwalo bhubhane emhlabeni, njengezinto ezibalulekileyo zothintelo lobhubhane, njengeemaski kunye nempahla yokukhusela, imfuno yezixhobo zonyango kunye nezinto ezinje ngezixhobo zokulinganisa ubushushu zikhule ngokukhawuleza, kwaye ziye zaba zezona mveliso zithandwayo ngexesha lobhubhane. Ngokwedatha yangaphambili yoMphathiswa Wezamashishini kunye neTekhnoloji yoLwazi, kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo, imveliso ye-infrared thermometer igqithile kuloo nyaka uphelileyo. Ngokunyuka kweeodolo ezivela phesheya kolwandle, unikezelo lwetyathanga lezemveliso lukwimeko yokunqongophala okuqhubekayo.
Ukuchaphazeleka kwimeko yobhubhane, uninzi lweeodolo zabavelisi phesheya kwezixhobo zokuthintela ubhubhane ziye zaqhushumba kutshanje. Abavelisi kwicandelo lokulinganisa ubushushu kunye nezixhobo zonyango bonke bathi bafumene iiodolo zaphesheya kwezilwandle kutshanje, kubandakanya izixhobo zokulinganisa ubushushu, isicoci kunye nokubeka iliso, ezivela eSoutheast Asia, Middle East naseYurophu. Ngenxa yokwanda ngesiquphe kwemfuno zaphesheya kwezilwandle, izixhobo zonyango ezinxulumene nokufunyanwa kwe-COVID-19 kunye nonyango ziyaqhubeka ukuthandwa, kubandakanya umpu wobushushu bebunzi, ithemometha ye-infrared, izixhobo ze-imaging ze-CT kunye nezinye izixhobo zonyango zinqongophele. Ibango elinamandla kwimarike yezonyango liqhuba ibango lezinto eziphezulu ze-elektroniki ukuba zikhule kakhulu.
Ngokwe-thermometer ye-infrared eshushu ngoku, izinto zayo kunye nezixhobo ikakhulu zibandakanya: inzwa yeqondo lobushushu infrared, i-MCU, imemori, isixhobo se-LDO, umkhuseli wolawulo lwamandla, idayode. Ubushushu be-infrared sensor lelona candelo liphambili lezixhobo zokulinganisa ubushushu. Phakathi kwazo, ukubonelelwa kunye nokufunwa kweenzwa, ukugcinwa, i-MCU, imeko yomqondiso kunye neetshipsi zonikezelo lwamandla ziqinile. Idatha ibonisa ukuba ibango le-infrared sensor ye-infrared icacile, kubalwa i-28%, kulandele iprosesa kunye ne-chip yamandla, ukubalwa kwe-19% kunye ne-15% ngokwahlukeneyo, kunye ne-PCB kunye ne-memory chip account ye-12%. Izinto ezenziweyo zi-8.7%.
Ngokusasazeka kwalo bhubhani kwihlabathi liphela, amazwe amaninzi akwimeko yonxunguphalo. Ngokonyuka kwemfuno yezixhobo zokukhusela ubhubhane ekhaya nakumazwe aphesheya, njengomvelisi wee-thermopile IR sensors kunye neemodyuli, eyona ndima ibalulekileyo kwindibano yonikezelo lwezixhobo zokulinganisa ubushushu, i-Sunshine Technologies iphendule kwimfuno ngokukhawuleza. Ngelixa siqinisekisa ngokupheleleyo ibango labathengi, sikomeleze uphando kunye nophuhliso olutsha, ukubonelela ngeyona nto iphambili ethembekileyo yezixhobo zokulinganisa ubushushu ezingathintelaniyo kunye nolawulo.
Ixesha Post: Dec-01-2020